/Blog/Gallery/I-Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) isebenza kanjani abakhi bomzimba
Posted on 11 / 18 / 2019 by UDkt Patrick Young wabhala ku Gallery.
1. Yini iPyridoxal Hydrochloride?
IPyridoxal Hydrochloride noma vitamin B6 iyi-vithamini encibilikiswa ngamanzi etholakala kakhulu ekudleni. Isetshenziswa ikakhulukazi njengesengezo sokudla.
Lapho isetshenziswa njengesengezo, i-Pyridoxal Hydrochloride ingalapha noma ivikele izinkinga eziningi zezokwelapha. Ngokuvamile kuthathwa ngomjovo, ngomlomo noma ngezithako zokudla.
Uma ungumakhi womzimba, le vithamini ikufanele ngoba inemisebenzi eminingana enenzuzo emzimbeni. Isibonelo, sisiza umzimba wakho ekwenzeni i-lipids, ama-carbohydrate nama-amino acid konke okudingeka ukwenziwa komzimba kahle.
Imithombo ejwayelekile ye-pyridoxine hydrochloride Vitamin B6 ekudleni ifaka okusanhlamvu, inkukhu / turkey, imifino nezithelo.
2. Kungani Abakhi bomzimba Bedinga Amavithamini - i-pyridoxine Hydrochloride?
Kungani amavithamini ebaluleke kakhulu kubakhi bomzimba? Ukuze ukwazi ukuqedela yonke imisebenzi onayo ngosuku, kufanele ukondle umzimba wakho ngezakhi ezibalulekile ezahlukahlukene zomzimba. Ukungabi nalutho kunoma iyiphi yalezi zakhi zomzimba kuzodala ukuwohloka kwendlela yakho ye-metabolic. Lokhu kuzoholela ekusebenzeni okuncane kanye nokusebenza kabi.
Njengomakhi womzimba, uzodinga izakhamzimba eziningi kunalezo eziphila impilo yokuhlala phansi. I-B-6 pyridoxine hydrochloride ibaluleke kakhulu kuwe ngoba iyadingeka kwimisipha phosphorylase, umsebenzi oxhumene ne-glycogen metabolism. Ngamafuphi, udinga ivithamini B6 ukuthola umzimba onempilo. IVitamin B6 ithuthukisa imisebenzi yama-enzyme abamba iqhaza ekuwohlokeni kwamaprotheni.
Imiphumela yePyridoxine hydrochloride emzimbeni zihlobene kakhulu neqhaza lazo kumaphrotheni metabolism. Kungakho uma uyisebenzisa, kungakuhle ukuthi usebenzise ibhulakufesi ngaphambi kokushaya ejimini. Ungathatha futhi ukudla okune-protein egcwele ngesikhathi sakho sangaphambi kokuzivocavoca, ngenkathi uziqeqesha, ngemuva kokuqeqeshwa nangaphambi kokuthatha umhlalaphansi uyolala.
Kodwa-ke, lokhu akusho ukuthi ungakunaki okunye ukudla. Umzimba wakho udinga inqwaba yamanye amaminerali abalulekile ukuze usebenze kahle futhi uvikele izifo.
3. Uyini umphumela wePyridoxine Hydrochloride njengevithamini lokuqina?
Isizathu sokuthi kungani udinga ukuthatha inani elanele le-B6 ukuthi linegalelo elikhulu ekuphendukeni kwamakhemikhali okuningi okubandakanya ama-amino acid namaprotheni.
Njengomakhi womzimba, uludinga kakhulu ekwakhekeni kweseli yakho ebomvu. Kufanele ukhulise amaseli wakho abomvu ukulawula ukuphuma kokuphuma kwamanzi futhi uqinisekise ukuthi umzimba wakho uthola umoya-mpilo owanele.
Esinye isizathu esenza ufune i-B6 ukuthi ithuthukisa izinga lakho lokumelana nengcindezi. I-B6 yenza i-iron ekudleni kwakho ukuthi itholakale kakhulu. Imisipha yakho idinga i-hemoglobin eningi (i-oksijini) eyengeziwe ukuze ikhuthazelele ukucindezelwa.
Udinga namandla amaningi ngesikhathi sokusebenza. IPyridoxine hydrochloride izuzisa umzimba wakho ngokwandisa izinga lokushiswa kwama-carbohydrate kumaseli akho. Lokhu kuqinisekisa ukuthi uthola amandla anele.
Ngesikhathi sokuqeqeshwa, kuzoba nengcindezi kwinqubo yokukhiqiza amandla omzimba wakho. Kuzoba futhi nezinguquko ezicutshini zomzimba wakho ezivela emisebenzini ekhathazayo. Ngaphezu kwalokho, uzolahlekelwa ngamanani amakhulu ezakhamzimba ezinduneni, umchamo, kanye nesithukuthuku ngenxa yokwanda komzimba.
Ngalezi zizathu, uzodinga ukubuyisa kabusha izakhi zomzimba wakho. Ungakwenza lokhu ngokuthatha ama-supplements ukuze ulondoloze futhi ulungise izicubu zakho zezicubu. Lokhu kuzoqinisekisa ukuthi izicubu zakho zihlala zivamile futhi ziqinile. Akukho okungeziwe okungcono kune-pyridoxine hydrochloride Vitamin B6 uma ufuna ukwakha kabusha izicubu zomzimba wakho.
4. Umlando wePyridoxal Hydrochloride
I-Pyridoxal Hydrochloride (65-22-5) yenziwe okokuqala kwi-1939 kepha yatholakala ku-1934. Ukutholwa kwenziwa nguPaul Gyorgy, udokotela waseHungary. Uyiqambe ngokuthi yi-Vitamin B6 futhi wayisebenzisela ukwelapha i-dermatitis acrodynia, isimo sesikhumba kumagundane.
Ngemuva kweminyaka emihlanu itholwe, omunye usosayensi, uSamuel Lepkovsky wakwazi ukuyihlukanisa nerayisi ukuthola i-pyridoxine hydrochloride powder.
Ku-1939, abakwaFolkers noHarris banqume ukwakheka kwe-pyridoxine. Ngemuva kweminyaka eyisithupha, uSnell wakhombisa ukuthi iB6 yayinezindlela ezimbili: i-pyridoxamine ne-pyridoxal. Igama elithi Pyridoxal Hydrochloride lavela ngoba i-vithamini B6 yayisungule ekhaya ngokuyisisekelo ku-pyridine.
Namuhla, i-World Health Organisation ifaka iPyridoxal Hydrochloride kuHlu lwabo Abalulekile Imithi. Lokhu kungenxa yokuthi bayibheka njengeminye yemithi ephephe futhi ephumelela kakhulu edingeka ezinhlelweni zezempilo. Iyatholakala ngaphezulu kwekhawunta nanjengo umuthi ojwayelekile.
5. Umthamo we-Pyridoxal Hydrochloride wabakhi bomzimba
Phakathi kwamavithamini e-B, i-Pyridoxal Hydrochloride ebaluleke kakhulu empilweni yomzimba neyengqondo yabakhi bomzimba. Kuyasiza ekukhuleni kwamaseli amasha, echaza I-Pyridoxine hydrochloride bodybuilding ikhono. I-B6 iphinde isize ekulinganiseni i-potassium ne-sodium, nasekwenzeni ama-nucleic acid, iDNA ne-RNA nayo eyingxenye yayo.
Abesifazane bangayisebenzisa ukukala ama-hormone futhi basize ekugomeni ngesikhathi sokukhulelwa. Ibuye ibuye nokugcinwa kokugcotshwa kwamanzi ngaphambi kokudla futhi inciphise izinhlungu zokuya esikhathini kanye nomqubuko.
Ukushoda kwePyridoxal Hydrochloride kuholela enovalo, ukungabinakho ukuqaqamba, ukuqwasha, ubuthakathaka, ulimi olukhanyayo, izipikili ezigogekile, isifo samathambo nethambo lamathambo.
Umthamo ophakanyisiwe we-FDA yi-2mg, kepha uma ufaka izithasiselo, umthamo ojwayelekile yi-20mg. IPyridoxal Hydrochloride ingaba yingozi uma uthatha ngaphezu kwe-2000mg.
Kodwa-ke, ngokolunye ucwaningo, umthamo wamanje we-Pyridoxal Hydrochloride onconyelwe abantu abasebenzayo nguHulumeni wase-US awanele.
Lokhu kusho ukuthi labo ababeka umkhawulo amaqembu okudla noma abavimbele amakhalori kungenzeka babe sengozini yokushoda. Ngakho-ke, kungenzeka bangazuzi emiphumeleni ye-pyridoxine hydrochloride uma nje bethatha umthamo njengoba unconywe nguhulumeni.
Ngokusekelwe kwimiphumela yalolu cwaningo, kungaba ukuhlakanipha ukubonana nochwepheshe wakho wezokunakekelwa kwezempilo ukusiza ukuthola ukuthi umthamo wokwakha ongcono kakhulu / ofanele we-pyridoxine hydrochloride.
6. Ukusetshenziswa kwezempilo kwePyridoxal Hydrochloride's Medical
Akukho ukuswela okungathí sina kwe-Vitamin B6 e-US, kepha kungenzeka kakhulu kubantu asebekhulile nasezinganeni. Uma uhlushwa yizimo ezinjenge-hyperthyroidism, isifo se-celiac, isifo se-autoimmune, isifo sezinso, noma uncike otshwaleni lapho-ke usengozini ephezulu yokuphelelwa yivithamini B6.
Umzimba awukwazi ukukhiqiza i-Vitamin B6, ngakho-ke kufanele uyithole kuma-supplements noma ekudleni. Kuyadingeka ukusebenzisa amanani anele amavithamini ukwelapha nokuvikela izifo ezingamahlalakhona kanye nempilo efanelekile.
Nazi izindlela eziyisishiyagalolunye ezixhaswa ngezesayensi ze-pyridoxine hydrochloride:
(1) Yehlisa Izimpawu Zokudangala futhi Yithuthukisa Imilo
I-B-6 pyridoxine hydrochloride idlala indima ebalulekile ekulawuleni imizwa. Lokhu kungenxa yokuthi kudala ama-neurotransmitters alawula imizwelo. I-Pyridoxine hydrochloride yokukhulelwa ibaluleke kakhulu kwabesifazane abanomzwelo noma abanokushintshana kwemizwelo okubangelwa ukungalingani kwama-hormone ngesikhathi sokukhulelwa.
I-B6 futhi yehlisa amazinga egazi e-homocysteine, i-amino acid ebhekene nezinkinga zengqondo njengokucindezeleka. Ucwaningo oluningi luye lwahlobanisa nezimpawu ezicindezelayo ngamazinga aphansi we-pyridoxine hydrochloride egazini.
(2) Yehlisa Ubungozi be-Alzheimer's futhi Iphakamisa Ubuchopho Bempilo
IVitamin B6 yaziwa ngeqhaza layo ekuthuthukiseni ukusebenza kobuchopho kanye nokuvimbela isifo se-Alzheimer's. Kwehlisa amazinga e-homocysteine ​​egazini ngaleyo ndlela anciphise ingozi yokulimazeka kwenkumbulo ne-Alzheimer's.
Olunye ucwaningo olubandakanya abantu abadala be-156 abanenkinga yokulimazeka okuthambile namazinga aphezulu we-homeocysteine ​​bathole ukuthi umthamo we-pyridoxine hydrochloride ophakeme wehla amazinga we-homocysteine ​​egazini futhi unciphisa nokuwohloka kwezinye izingxenye zobuchopho ezisengozini ye-Alzheimer's.
(3) Ivimbela futhi Iphathe i-Anemia
IVithamini B6 ivimbela futhi iphathe i-anemia ebangelwa ukuntuleka kwayo. Lokhu kungenxa yokuthi idlala indima ekhiqizweni kwe-hemoglobin. IHemoglobin idonsa umoya-mpilo kumaseli womzimba. Ngezinga eliphansi le-hemoglobin, amaseli akho ngeke athole i-oksijini eyenele futhi ngenxa yalokhu, uzoba nokukhula komzimba futhi uzizwe ukhathele noma ubuthakathaka.
Izinga eliphansi le-vithamini B6 lixhunyaniswe ne-anemia, ikakhulukazi kwabesifazane abaneminyaka yobudala bokuzala noma labo abakhulelwe.
(4) Iphatha Izimpawu ze-Premenstrual Syndrome (PMS)
Enye yezinzuzo ze-pyridoxine hydrochloride ukuthi zingasetshenziswa ekwelapheni izimpawu ze-PMS kufaka phakathi ukungazweli, ukudangala nokukhathazeka. Abaphenyi bakholelwa ukuthi i-vithamini B6 ingaziphatha lezi zimpawu ngoba zakha ama-neurotransmitters asiza kumthethonqubo wokuphefumula.
Kokunye ukuhlola okuncane, kwatholakala ukuthi izimpawu ze-PMS kufaka phakathi ukukhathazeka, ukungabekezeleleki, kanye nokushintshana kwemizwelo kungancishiswa kakhulu ngokuthatha i-200mg ye-magnesium kanye ne-50mg ye-vitamin B6 ngosuku.
(5) Iphatha Isicanucanu Ngesikhathi Sokukhulelwa
Sekungamashumi eminyaka, kusetshenziswa i-Vitamin B6 ekwelapheni isicanucanu nokuhlanza kwabesifazane abakhulelwe. Futhi isithako se-Diclegis, isidakamizwa esisetshenziswa ekwelapheni ukugula kwasekuseni. Lokhu kuphakathi kwezinzuzo eziphezulu ze-pyridoxine hydrochloride abesifazane abahlupheka ngalesi simo ngesikhathi sokukhulelwa kwabo.
Umthamo ofanele we-pyridoxine hydrochloride ekukhulelweni uyahlukahluka kumuntu nomuntu. Ucwaningo oluhilela abesifazane abakhulelwe be-342 bathola ukuthi umthamo wansuku zonke we-30mg we-vithamini uyehlisa umuzwa wabo we-nausea ezinsukwini ezinhlanu ngemuva kokuqala kokwelashwa
Kokunye ukuhlola okubandakanya abesifazane abakhulelwe be-126, iziqephu zokucanuzelelwa kwenhliziyo kanye nokuhlanza kwehliswa kakhulu ngokuthatha i-75mg ye-vitamin B6 nsuku zonke. Izimpawu zincishiswe i-41% ngemuva kwezinsuku ezine zikhombisa ukusebenza kahle kwe-pyridoxine hydrochloride yokukhulelwa.
(6) Yehlisa ubungozi besifo sezinhliziyo ngokuvimbela imithambo ye-Clogged
I-Pyridoxine hydrochloride idlala indima enkulu ekunqandeni ukuvalwa kwemithambo yemithambo yingakho kunciphisa ubungozi besifo senhliziyo. Uma unamazinga aphansi e-vithamini B6, ingozi yakho yokuthola isifo senhliziyo icishe icishe iqhathaniswe naleyo enamazinga evamile evithamini egazini. IVitamin B6 inciphisa amathuba okuvalwa kwemithambo yegazi ngokunciphisa amazinga e-homocysteine ​​egazini.
Kokunye ukuhlola okwabandakanya amagundane ayengaphathekile ku-vitamin B6, kwatholakala ukuthi ayenamazinga aphezulu e-cholesterol futhi nawo athuthukisa izilonda. Lokhu kungenzeka ukuthi kubangele ukuqhekeka okungekuhle uma kwenzeka bevezwa ku-Homocysteine. Okunye ukucwaninga okubandakanya abantu kukhombisile nokuthi i-vitamin B6 ingavikela izifo zenhliziyo.
(7) Isiza Ekuvimbeleni Umdlavuza
Lokhu mhlawumbe kubaluleke kakhulu pyridoxine hydrochloride isebenzisa esinikezwe ukwanda komdlavuza namuhla. Uma uthola ngokwanele i-Pyridoxine hydrochloride, ingozi yakho yokuthola izinhlobo ezithile zomdlavuza izokwehliswa. Isizathu salokhu asicaci kahle kepha abacwaningi bakholelwa ukuthi kuhlobene nekhono le-B6 lokulwa nokuvuvukala okubangela izimo ezingamahlalakhona ezinjengomdlavuza.
Ngemuva kokubukeza izifundo ze-12, abanye abacwaningi baphethe ukuthi inani elanele legazi le-B6 lihambisana nengozi ephansi yokuba nomdlavuza we-colorectal. Uma unamazinga aphezulu we-B6, amathuba akho okuba nomdlavuza we-colorectal azokwehliswa yi-50% ngokuqhathaniswa nalelo elinamazinga aphansi we-B6.
Ocwaningweni oluthile olwenziwe ukuthola ubudlelwane phakathi kwamazinga e-pyridoxine hydrochloride nomdlavuza webele, kwatholakala ukuthi amazinga anele we-B6 egazini anciphisa ingozi yomdlavuza webele, ikakhulukazi kwabesifazane be-postmenopausal.
(8) Ivimbela Izifo Zamehlo futhi Ikhuthaza Ukusebenza Kwamehlo
IVithamini B6 isiza ukuvikela izifo zamehlo, ikakhulukazi lezo ezihlobene nokuguga - ukukhula okuhlobene nobudala bama-macular degeneration (AMD). Lapho unamazinga aphezulu we-homocysteine ​​ogeleza egazini lakho, uzoba nengozi enkulu yokuba ne-AMD. IPyridoxine hydrochloride isiza ekwehliseni amazinga aphezulu e-homocysteine ​​egazini ngaleyo ndlela anciphisa ubungozi be-AMD.
Ngokusho kolunye ucwaningo olwenziwe kubantu besifazane abangaphezu kwe-5,000, kwatholakala ukuthi umthamo wansuku zonke we-vitamin B6 ohlanganiswe ne-Vitamin B12 ne-folic acid unciphisa ubungozi be-AMD bufika ku-40%, uma uqhathanisa nalabo abangathathi amavithamini.
Olunye ucwaningo luxhume izinkinga zamehlo emazingeni aphansi egazini; ikakhulukazi izinkinga zamehlo eziholela ekuqhekekeni kwemithambo exhunywe kwi-retina. Izinga eliphansi le-pyridoxine hydrochloride libuye lihlotshaniswe nokuphazamiseka kwe-retina.
(9) Iphatha ukuvuvukala kwamathambo kwe-Arheumatoid
Uma uhlushwa i-Rheumatoid Arthritis infigueation, ukuthatha i-B6 kungasiza ekwehliseni izinhlungu zakho. I-arthritis ngokwayo yehlisela amazinga e-B6 emzimbeni futhi leli zinga lidinga ukulungiswa.
Ucwaningo olwenziwe kubantu abadala be-43 lithole ukuthi umthamo wansuku zonke wokuhlanganiswa kwe-5mg we-folic acid ne-100mg ye-B6 wehlise kakhulu izinga lama-molecule wokuvuvukala emizimbeni yabo ngemuva kwamasonto e-12.
7. Imiphumela emibi yePyridoxal Hydrochloride
IPyridoxine hydrochloride iphephile ukuthi isetshenziswe abakhi bomzimba. Kuphephile futhi ukusetshenziswa kwezokwelapha. Kodwa-ke, inemiphumela ehlukile kubantu abahlukile Eminye imiphumela emibi ye-pyridoxine hydrochloride ifaka phakathi:
Izimpawu zokuphendula komzimba ezinjengobunzima bokuphefumula, okhalweni, ukuvuvukala kwezindebe zakho, ubuso, umphimbo noma ulimi
Kwehliswe umuzwa wokudlidliza, izinga lokushisa nokuthinta
Ukuzizwa ukhathele noma ukugoqa ezandleni zakho
Ukulahleka kokuxhumana noma ibhalansi
Ukuxineka okuthambile noma ukuqaqamba, ukuphaphaza noma umuzwa ovuthayo ezinyaweni nasezandleni
Ukwehla komlomo noma ezinyaweni zakho
Ukuzwela ukukhanya kwelanga
Uma uhlangabezana nemiphumela emibi kakhulu ye-pyridoxine hydrochloride lapho-ke kungakuhle ukuthi ufune ukwelashwa.
8. Yiziphi izexwayiso kanye nezindlela zokuvikela iPyridoxal Hydrochloride?
Imithamo ephezulu kakhulu yePyridoxal Hydrochloride ingadala ukuphazamiseka kwemizwa. Lokhu kuphazamiseka kungahle kuholele ezinkingeni zokuqina kanye nokulahlekelwa umuzwa emilenzeni. Kukhona nemibiko eminye ephezulu i-pyridoxine hydrochloride kungaholela ekuphendukeni kwesikhumba. Ngenhlanhla, lapho umisa imithamo ephezulu, uzolulama ngokugcwele.
Kuyelulekwa ukuthi ungathathi imithamo ephezulu yemithi ngesikhathi sokukhulelwa. Udokotela ofanelekayo kuphela okufanele anqume umthamo we-Pyridoxine hydrochloride lapho ekhulelwe. Futhi qaphela ukuthi noma ungumakhi womzimba noma cha, akufanele uthathe ngaphezu kwe-100mg ye-pyridoxine hydrochloride ngosuku ngaphandle kokuthi ukhulume nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo.
Uma us Umuthi wePyridoxal Hydrochloride, akufanele ume, uqale ukuwusebenzisa ngokuhlangana nesinye isidakamizwa, noma ushintshe umthamo ngaphandle kwemvume yomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo.
Noma iPyridoxal Hydrochloride ingazibandakanyi nokuxhumana okungathi sína noma okunzima nezinye izidakamizwa, ngaso sonke isikhathi kuhle ukuthi uqaphele.
I-Cordarone (Amiodarone) yandisa ukuzwela ukukhanya kwelanga lapho ihlanganiswa ne-B6. Le nhlanganisela ingezelela amathuba akho okuhlushwa imivimbo, ukuqhakaza, noma ukushiswa yilanga ezindaweni eziveziwe zesikhumba sakho. Qinisekisa ukugqoka okokuvikela noma ukuvimba elangeni lapho uthatha le nhlanganisela.
Umzimba wakho ubhidliza iLuminal (Phenobarbital) ukuze uyiqede. I-Pyridoxal hydrochloride (65-22-5) inyusa izinga lapho i-Luminal iphuka khona lapho kunciphisa ukusebenza kwayo emzimbeni wakho.
Njenge-Luminal, Pyridoxal hydrochloride (65-22-5) yephula lo mkhemikhali ukuwususa emzimbeni wakho. Ukuthatha inhlanganisela ye-Dilantin ne-Pyridoxal Hydrochloride kuzonciphisa ukusebenza kwangaphambilini emzimbeni wakho. Lokhu kungakhulisa amathuba okuthi ubhekane nokuquleka okuthile.
Ezinye izidakamizwa ezihlangana nePyridoxal Hydrochloride zifaka:
I-Pyridoxal Hydrochloride inokuxhumana okumnene nezidakamizwa ezihlukile kune-70. Ngakho-ke, ngaphambi kokusebenzisa noma yisiphi isidakamizwa ngokuhambisana naso, qiniseka ukuthi uthintana nomhlinzeki wakho wezempilo.
I-B6 isebenza kahle namanye ama-B-Vitamin MCT's, CLA, zinc, sodium, potassium, magnesium, no-Vitamin C.
Izinzuzo zePyridoxal Hydrochloride kubakhi bomzimba ziningi. Hhayi kuphela abakhi bomzimba, wonke umsubathi onzima udinga ukuba nale vithamini esitokweni. Kodwa-ke, kufanele uyisebenzise ngokunamathela ngokuqinile kumithamo enconywe ngabezokwelapha.
Imisebenzi ekhuthele ebandakanyeka ekwakheni umzimba iholela ekugqokeni kwamaseli omzimba nezicubu zomzimba. Kungcono ukufaka esikhundleni salawa usebenzisa izithasiselo ze-Vitamin B6. Lapho uthenga a I-Pyridoxal Hydrochloride umkhiqizo, qiniseka ukuthi wenza njalo emithonjeni edume njengokuthi Aasraw. Ukwenza i-esemthethweni yePyridoxine hydrochloride uthenge, vele uvakashele i-asasawdaw namuhla wenze umyalo.
I-1 Osswald, H, et al, 1987 Ithonya le-sodium ascorbate, i-menadione sodium bisulfite noma i-pyridoxal hydrochloride esenzakalweni esinobuthi kanye ne-antineoplastic se-N-methylformamide ku-P 388 leukemia noma i-M 5076 sarcoma ku-Mice Toxicology 43 (2) I-PMID: 183
I-2 Reimer, i-LG, et al, i-1983 Umphumela we-pyridoxal ekukhuleni kwe-streptococci enempilo yomsoco namanye amagciwane kuma-agar Diagnostic microbiology kanye nesifo esithathelwanayo i-1 (4): 273-5 PMID: 6667606
I-3 Zygmunt, WA, et al, 1962 REVERSAL OF d-CYCLOSERINE INHIBITI YOKWAKHIWA KWEZOBUCHWEPHESHE NGU-ALANINE Ijenali ye-bacteriology 84 (1): 154-6 PMID: 16561951
Ngabe uFlibanserin Usiza Kanjani Owesifazane Njenge-Hormone Yobulili	I-Synephrine HCL Powder - Ukushiswa kwamafutha kanye Nezithasiselo zokunciphisa umzimba
I-Trestolone Acetate (MENT) i-powder